प्राप्त सहयोग र प्रतिबद्धता विवरण
जन्म गते 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
हाल रहनुभएको देश Nepal Afganisthan Australia Austria Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Brunei Cambodia Canada China Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Germany Hong Kong India Indonesia Ireland Israel Italy Japan Jordan South Korea Kuwait Lebanon Luxembourg Malaysia Mauritius Myanmar Netherlands New Zealand Norway Oman Pakistan Poland Portugal Romania Russia Saudi Arabia Singapore South Africa Spain Sri Lanka Sweden Switzerland Syria Taiwan Thailand Turkey United Arab Emirates United Kingdom United States Vietnam Virgin Islands, British Others
तपाईं पार्टीमा कतिको समय दिन सक्नु हुन्छ? दैनिक हप्तामा केही समय १५ दिनमा केही समय महिनामा केही समय अहिले निर्णय गरेको छैन समय दिन सक्दिन
Copyright © 2019 Sajha Party | All Rights Reserved | Developed with ❤ by Technorio.
साझा विवेकशील पार्टीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईंप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौं। तपाईंको सहयोग/सद्भावविना एकै पुस्तामा नेपाल रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सामुहिक सपना पुरा हुन सक्दैन। तपाईंको साथ जारी रहोस्। हामी हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक देश रूपान्तरणको यात्रामा कटिवद्ध रहने छौँ। यहाँहरु निम्न तरिकाबाट हामीसँग सकृय हुन सक्नुहुनेछ:
१) हाम्रो सदस्यता, संगठन विस्तार, अभियान तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा समय दिएर।
२) हामीलाई आवश्यक श्रोत-साधन उपलब्ध गराएर।
३) घर-परिवार, समुदाय, तथा मित्रहरुमाझ हाम्रो संगठनका सन्देशहरू व्यक्तिगतरूपमा र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याएर!
तपाईंले दिएको इमेलमा हामी पार्टीसँग सम्वन्धित जानकारी बेलाबखत पठाइरहने छौं। तपाईंको जय होस्, नेपालको जय होस्!
फोन: ०१-५५३६०६२, ०१-५०१०६०९,
साझा विवेकशील पार्टीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईंप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौं। तपाईंको सहयोग/सद्भावविना एकै पुस्तामा नेपाल रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सामुहिक सपना पुरा हुन सक्दैन। तपाईंको साथ जारी रहोस्। हामी हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक देश रूपान्तरणको यात्रामा कटिवद्ध रहने छौँ। यहाँहरु निम्न तरिकाबाट हामीसँग सकृय हुन सक्नुहुनेछ:!
१) हाम्रो सदस्यता, संगठन विस्तार, अभियान तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा समय दिएर।!
२) हामीलाई आवश्यक श्रोत-साधन उपलब्ध गराएर।!
३) घर-परिवार, समुदाय, तथा मित्रहरुमाझ हाम्रो संगठनका सन्देशहरू व्यक्तिगतरूपमा र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैल्याएर।!
तपाईंले दिएको इमेलमा हामी पार्टीसँग सम्वन्धित जानकारी बेलाबखत पठाइरहने छौं। तपाईंको जय होस्, नेपालको जय होस्!!
कार्यालय समय: बिहान ९ देखि बेलुकी ५:०० बजेसम्म
नयाँ फारम भर्नलाई यहाँ थिच्नुहोस्